Kono Oto Tomare! - के एक मौसम P सम्भव छ? - पालना दृश्य
by Dima 18th जनवरी 2019 12th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड Kono Oto Tomare मा! - के एक मौसम P सम्भव छ?
"Kono Oto Tomare!" बाट लिइएको (सीजन १ एपिसोड))
Kono Oto Tomare वा ध्वनि जीवन! वा अंग्रेजीमा "ध्वनिहरूको जीवन!" anime को एक हो जहाँ तपाईं या त यो प्रेम वा घृणा। कथा धेरै सिधा अगाडि र पछ्याउन सजिलो छ र यसमा एक साधारण समस्या समाधान प्रकारको कहानी छ। व्यक्तिगत रूपमा, म दुबै मौसमहरू मन पराउँछु र म यसलाई हेर्न मजाको समय थियो। योसँग कहानीमा समावेश भएका विभिन्न उप-कथाहरू र अन्य घुमाउने आख्यानहरू छन्। तर Kono Oto Tomare वा KOT के बनाउँदछ किन म यसलाई यस ब्लगमा हेर्दैछु जस्तो राम्रो छ? र के मौसम possible सम्भव पनि छ? यो ब्लग पढ्न जारी राख्नुहोस्।
यदि तपाईंले कोनो ओटो तोमर देख्नुभएको छैन र यकिन हुनुहुन्न कि यदि तपाईं यो शट दिन चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई हाम्रो ईनो कोनो ओटो तोमर पढ्न सुझाव दिन्छौं! लायक हेर्दै? ब्लग चिन्ता नलिनुहोस् हामी केही खराब गर्दैनौं। आर्कहरू महान छन् र हामी दुबै यौन र आक्रोशित, विभिन्न पात्रहरू बीचको तनावको धेरै देख्दछौं, र यसले वास्तवमा शुरूबाट नै उच्च दांव सेट गर्दछ। हामी सबै पात्रहरूको दृष्टिकोणबाट एक महाकाव्य कहानी देख्छौं र यो इमान्दारीपूर्वक मैले अहिलेसम्म हेरेको मेरो सबैभन्दा मनपर्ने श्रृंखला हो। यो अविश्वसनीय पनि यादगार थियो र मैले दुबै मौसमहरू दुई पटक हेरेका छु!
"Kono Oto Tomare बाट लिइएको! (सीजन १ एपिसोड))
KOT को मुख्य कथा एकदम सरल छ र यो विद्यार्थीहरूको समूह र कोटो क्लबको चारैतिर घुम्दछ जुन ती सबै टेकजो कुराटा द्वारा संचालित पहिलेका एपिसोडहरूमा सामेल हुन्छन्। प्रारम्भमा, टेको उसको स्कूलको लागि कोटो क्लबको एकमात्र सदस्य हुन्, अन्य सदस्यहरूको रूपमा, हामीले देखाइएको अनुसार, सबै स्नातक, जब तिनीहरू अन्य शैक्षिक अवसरहरूको पछि लाग्छन्। क्लब बन्द हुनेवाला छ, जब कुराटा आश्चर्यचकित भए पछि, नयाँ सदस्य, चिका कुडोसँग मिल्छ। कुडोलाई उनका प्रायः कक्षाका साथीहरूले लगनशीलको रूपमा हेरेका छन्, जुन शब्द जापानी टिभी कार्यक्रम र एनिमेमा धेरै आएको देखिन्छ। हुनसक्छ यो म अधिक पश्चिमी पृष्ठभूमिबाट आएको हुँ, तर त्यो वाक्यांश एक हो जुन मैले सायद सायद सुन्न पाइनँ, तर हुनसक्छ मलाई मात्र।
जे भए पनि कुडो र टेकजुले महसुस गरे कि यदि उनीहरूले अधिक सदस्य पाएनन् भने क्लब पूर्वनिर्धारित रूपमा बन्द हुनेछ। त्यसोभए, तिनीहरू प्रयास गर्छन् र नयाँ व्यक्तिहरू सामेल हुनको लागि। एकदिन उनीहरू अभ्यास कोठामा छिर्छन् र त्यहाँ एउटी केटी बस्छिन्। उनको नाम सतोवा होजुकी हो र यसले थाहा पायो कि उनी धेरै प्रसिद्ध कोटो खेलाडी हुन्, उनी पनि कुडो र कुराता जस्ता उमेरकी छिन्। उनी उनीहरूलाई विश्वस्त गराउँछिन् कि उनी एक्लै आफ्नो दक्षताका साथ उनलाई नागरिकतामा लैजाने छन्। कुडोबाट उनको कडा आलोचना हुने टिप्पणी एउटा टिप्पणी हो, किनकि उनीहरु बुझ्न सक्दैनन् कि उनीहरुलाई उनीहरुका क्लबमा अन्य अतिरिक्त सदस्यहरु बिना यो कसरी प्राप्त गर्ने सम्भव हुन्छ। पहिलो वा दोस्रो एपिसोडमा तिनीहरू more थप वर्णहरू, Saneyasu Adachi, Kota Mizuhara र Michitaka Sakai भरि आउँदछन्।
सुरुमा उनीहरू क्लबमा सामेल हुन हिचकिचाउँदछन् तर होजुकीले उनीहरुलाई सामेल हुनको लागि उनको रूप र आकर्षण प्रयोग गर्दछ, उनीहरुलाई सीधा तर्काएर र तिनीहरूलाई सुन्दर भन्ने। यसले others जनालाई क्लबमा सामेल हुनको लागि प्रोम्प्ट गर्दछ र यस बिन्दुबाट हाम्रो नयाँ कोटो क्लब मेम्बरहरू हुन्। हामी मुख्यतया होजुकी, कुरता र कुडोमा ध्यान दिन्छौं ध्वनिहरूको जीवनको सम्पूर्ण श्रृंखलाको समयमा तर अन्य पात्रहरूले मैले केहि स्क्रिन समय पाउँछन्। त्यस समूहले त्यसपछि "नागरिक" को लागी प्रयास गर्न को लागी अगाडि बढ्छ र आफ्नो सबै भन्दा राम्रो प्रयासको बाबजुद पहिलो प्रयासमा सफल हुँदैन। कथा वास्तवमै यस प्रकारको व्यस्त रहेको छ र यसले वास्तवमा चरित्रहरूमा गहिराइ राख्दछ। त्यसोभए किन मलाई लाग्छ कि कथन महान छ र यसले वास्तवमै पहिलो सीजनको अन्त्यको लागि उच्च दांव सेट गर्दछ।
कोटो क्लब इन्टसेन्सन
"Kono Oto Tomare" बाट लिइएको (सत्र 1 एपिसोड 10)
समूहले नागरिकहरूको लागि योग्यता हासिल गर्न निकै कडा प्रयत्न गरिरहेको छ र ती श्रृंखलाहरूमा तिनीहरू जारी राख्छन्। होजुकी आफ्नी आमासँगको प्रदर्शन नभएसम्म उहाँसँग नजिक हुनुहुन्थ्यो जसमा उनले आफूले गर्नु पर्ने गीतबाट फरक गीत बजाउँछिन्। यो प्रदर्शन कि उनी दिन्छ भनिन्छ "टेन्कीयू", र मलाई लाग्छ अ translation्ग्रेजी अनुवाद" हेभन्स रो "हो। उनको प्रदर्शनको महत्त्व यो छ कि त्यो उनको क्रोध र पीडा व्यक्त गर्ने तरिका थियो जुन उनले त्यस समयमा पीडित भइन्।
Hozuki "Tantrum फेंक" को रूपमा वर्णन गर्दछ। दुर्भाग्यवश उनकी आमाले यो तरीका देख्दैनन् र यसले उनी प्रतिस्पर्धाबाट अयोग्य ठहरिन्छ र त्यस समयमा उनी भाग लिने कोटो स्कूलबाट बहिष्कृत हुन्छ। उनले खुलासा गरे कि यही कारणले उनीले कुराटाको क्लबमा सम्मिलित हुने निर्णय गरेकी थिइन् किनभने उनले क्लबलाई राष्ट्रियमा पुर्‍याउन र जित्न सक्छिन्। उनीले यसलाई अवसरवादी करियरको रूपमा हेरिरहेकी छिन, जुन उनको आमाको साथ राम्रो स्थितिमा फर्किनेछ र उनको प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित हुनेछ।
यो होजुकीको मूल अभिप्राय थियो, तर पछि पहिलो शृंखलामा हामी देख्छौं कि ऊ अरू मान्छेहरूसँग कोट्टो बजाउन साँच्चै मनपराउँछिन्, र उनले क्लबमा अन्य सबै सदस्यहरूसँग साथी बनाउँछिन्। उनको कोटो र उनको क्षमताहरूमाथिको विश्वास पुनर्स्थापित भयो र यो कहानीको प्रगति हो। उनीहरूको स्कूलमा अर्को प्रदर्शन छ जुन उनीहरू पछि दोस्रो सत्रमा जान्छन्, र यसले उनीहरूलाई वास्तवमै उनीहरूलाई प्रेरणा दिन्छ जुन उनीहरूले नागरिकहरूको लागि योग्य हुन आवश्यक छ र पहिलो स्थान जित्ने प्रयास गर्नुहोस्। यो मेरो विचारमा साँच्चिकै ठूलो कथा हो र यही कारणले धेरै मानिसहरूले दोस्रो सत्रको लागि आशा गरिरहेका थिए, अन्तिम सत्रहरूको अन्तिम अन्त्यको बावजुद। हामी त्यसबारे पछि छलफल गर्नेछौं, तर पहिला हामी वर्णहरूमा जान्छौं।
पहिले हामीसँग छ टेकजो कुराटा, जो टोकिसे हाईस्कूलको विद्यार्थी हो। ऊ लजालु छ, आत्मविश्वासको कमी छ र मेरो विचारमा सामान्यतया कडा परिश्रमको रूपमा देखिन्छ। ऊ कोटो खेल्न मन पराउछ र कुनै अन्य शौकहरू लाग्दैन, यो खराब चीज होईन भनेर। उहाँसँग प्रशंसनीय चरित्र छ र म उहाँ बारे केही भन्न सक्दिन।
टेकजो पनि एकदम भावनात्मक चरित्र हो र हामी यो कुडो र होजुकीसँगको उसको कुराकानीबाट देख्छौं, दुबै खुशीले उनलाई कुनै बिन्दुमा रोइरहेका छन्। सबैमा उहाँ एक ठूलो पहिलो चरित्र हुनुहुन्छ जसको साथ सहानुभूति दर्साउनुहुन्छ र लगानी गर्नुहुन्छ, धेरै जस्तै कुडो र होजुकी, यी तीनहरू र जसमा हामी सबैभन्दा बढि रुट गर्दैछौं।
अर्को हामीसँग छ चिका कुडो, जो एक समस्या निर्माता र उच्च स्कूल मा उनी उपस्थित धेरै मान्छे द्वारा नराम्रो प्रभाव को रूप मा देखिन्छ। उसको हजुरबुबा एक पेशेवर कोटो निर्माता थिए र उनी नै थिए जसले (उनको मृत्यु पछि) कुडोलाई इन्स्ट्रुमेन्ट राम्रोसँग बजाउन सुरु गरे।
कुडोलाई हजुरबुबा र हजुरआमाको मृत्युको सामना गर्न निकै गाह्रो छ र उनको मृत्यु भएपछि उनले होजुकी र टेकजोले नागरिकतामा जानको लागि उसको प्रस्ताव राखेको व्यक्तिगत पीडा आफैसँग गरेका थिए। उनी कुरता जत्तिकै मेहनती हुन् र उनी होजुकीको खेल्ने कला र कलाको पनि प्रशंसा गर्छन्। होजुकीप्रति उसको रोमान्टिक भावना हुन सक्छ तर यो एनिमेसमा वास्तवमै कहिल्यै विस्तार भएको छैन, हामी मंगाको बारेमा निश्चित छैनौं।
अन्तिम हामीसँग छ सतोवा होजुकी, जो, कुराटा र कुडो जस्तै टोकिस हाईस्कूलमा जान्छन्। उनी मेहनती हुन् र कोटो खेल्न असाधारण प्रतिभाशाली छिन्। धेरै उनीसँगै कोटो क्लबका सदस्यहरू जस्तै उनी पनि कोटोको नागरिकहरूमा पुग्न लगानी गरिन् र त्यसो गर्न चाहन्छिन ताकि उनी आफ्नो आमासँग पुनर्मिलन गर्न सक्नेछन् र पेशेवर कोतो खेलाडीको रूपमा आफ्नो प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित गर्न सकून्।
उनी परम्परागत रूपमा आकर्षक हुन् र उनीसँग सीपहरू छन् जसले उनलाई मनमोहक र राम्रो देखिन्छ। यो एनिमे श्रृंखलामा देखाइएको छ कि उनको कुडोमा रोमान्टिक चासो हुन सक्छ। उनी उसको वरिपरिको बिभिन्न कार्य गर्दछन् र सामान्यतया तिनीसंग झगडा लिन्छन्, नियमित आधारमा उनीहरुलाई छेड़ेर। कहिलेकाँही जब दुई एक्लो हुन्छन् वा अन्य क्लबका सदस्यहरूसँग उनी सामान्य रूपमा लजालु स्वभावको देखिन्छन् र उनको शब्दले ठेस खाउँदछन्, उनी वरिपरि स्पष्ट रूपमा घबराउँछिन्। यो स्पष्ट छ कि उनीसंग उनीहरुसंग भावनाहरु रहेको छ र कुडो र होजुकीको सम्बन्ध शृंखला बढ्दै जाँदा बढ्दै जान्छ।
साउन्ड्स अफ लाइफमा उप क्यारेक्टरहरू वास्तवमा मेरो विचारमा सब क्यारेक्टरहरू होइनन्। हरेक फरक चरित्रले क्लब र एक अर्कामा आफ्नै सीपहरू र प्रयोगहरू प्रदान गर्दछ। यसले प्रत्येक पात्रलाई मूल्यवान बनाउँदछ र यसको मतलब हामी वास्तवमै प्रत्येकमा लगानी गर्न सक्दछौं। उदाहरणको लागि, दोस्रो सत्रको पहिलेको एपिसोडहरूमा, अडाचीले सोच्न थाल्दछ कि क्लबमा उसको सीपको खाँचो छैन, किनभने ऊ अभ्यासमा गडबडी गर्दछ। जे होस्, श्री टाकिनामीले अडाचीलाई बताउँछिन् कि उनी क्लब र अन्य सदस्यहरूका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। तकिनमीले यसको कारण प्रकट गर्दछ कि उहाँको आवाज अन्य सबै आवाजहरूसँग मेल खान्छ, त्यसैले जब ती सबै एकजुट भएर खेल्छन् उसले ती सबैलाई जोड्दछ।
परम्परागत जापानी उपकरणहरू जस्तै कोटोलाई एक्लै छोडिदिनुमा मसँग वास्तवमै मेरो चासो थिएन। यद्यपि जीवनको ध्वनिले मलाई यस प्रकारको कुरामा रुचि राख्यो। मसँग अन्य मानिससँग एकसाथ सयौं मानिसहरूसामु इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउने हिम्मत म कहिले हुने छैन। KOT ले वास्तवमै यसमा जोड दिन्छ र यसले जापानी विद्यार्थीहरू जस्तो कोतो क्लबका सदस्यहरू मार्फत जान्छन् देखाउँदछ। KOT का सबै पात्रहरू अविस्मरणीय थिए, र उनीहरू सबैले प्रस्तुत गर्न बिभिन्न सीपहरू थिए। यहाँ केहि व्यक्तिहरू हुन् जुन मलाई सबैभन्दा मन पर्यो, शीर्षबाट (सबैभन्दा मनपर्ने) बाट तल (कम्तिमा मनपर्ने) को श्रेणीमा।
हाकुटो क्लब अध्यक्ष
"Kono Oto Tomare" बाट उल्लेखनीय पात्रहरू!
"Kono Oto Tomare!" बाट लिइएको (एपिसोड १२)
अन्त प्लट बुझ्दै
अन्तिम प्लाट बुझ्ने जहिले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ जब कुनै नयाँ एनिमेसन श्रृंखलाको लागि नयाँ मौसम आवश्यक वा सम्भव छ कि छैन भनेर निर्णय लिँदा। यो धेरै anime मा लागू हुन्छ, Kono Oto Tomare सहित। KOT को अन्तिम प्लट मेरो राय मा धेरै आश्चर्यजनक छ। यसले पहिलो सत्रमा उत्पन्न भएका धेरै समस्याहरूको समाधान पनि गर्‍यो। लगभग सबै यी समस्याहरू र आर्कहरू समाधान / समाप्त भएका थिए।
हामी देख्छौं कि होजुकी उसको आमासँग पुनर्मिलन भए पछि उनीहरू बाहिर आए पछि कुडो र कुराटा र बाँकी कोट्टो क्लबले उनीहरूको नागरिकतामा जानको लक्ष्य हासिल गरे। एपिसोड ११ र १२ को बखत हामी अन्य स्कूलहरूको प्रदर्शनहरू हेर्नेछौं जुन हामीले पहिलो सत्रमा देख्यौं। हामीले अन्य स्कूलहरू कसरी टोकिसेको विद्यार्थीहरूको प्रतिक्रियाहरू र सुधारहरू देख्नको विपरित तिनीहरूको व्यक्तिगत अनुभवहरूबाट सुधार र बढेको छ भन्ने कुरा पायौं।
केहीले तर्क गर्न सक्दछ कि चरित्रको गहिराइलाई लागू गर्ने यो सस्तो तरीका हो किनकि तिनीहरूले अन्तिम मिनेटमा यो गर्छन्, जबकि ती घटनाहरू वास्तवमा घटित भइरहेको समयमा देखाएनन्। जे होस्, यी सानो दृश्यहरूले तपाईंलाई अर्को विद्यालयमा अन्य पात्रहरूप्रति सहानुभूति दर्शाउनको लागि धेरै राम्रो काम गर्‍यो, किनकि अब तपाईं उनीहरूलाई यस प्रकारको अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ। म उनीहरूले यो कसरी गरे भन्ने कुरामा म सहमति जनाउँदिन, तर यसले प्रत्येक प्रदर्शन बनायो जुन बिभिन्न स्कूलहरूले धेरै रमाईलो र आकर्षक बनाएका थिए। यो किनभने मलाई थाहा थियो कि प्रत्येक स्कूलको लाइनमा के थियो र विशेष गरी उनीहरूले पहिले पढेका थिए।
Hozuki पुनर्मिलन + कुडो Hozuki आमा संग वार्ता
हामीले होजुकीलाई उनको आमासँग पुनर्मिलन भएको देख्यौं। दुई जना बने र अन्ततः एकअर्काको हतियारमा थिए, होजुकीकी आमाहरूलाई सामान्य मन नपरेसम्म उनले आफ्नी छोरीलाई इन्कार गर्दा। दुई एपिसोड १ re मा पुनर्मिलन भएका छन् र यो सबैजनाको अगाडि खुल्लमखुल्ला रोइरहेको दुई जनाको साथ हेर्नका लागि एकदम भावनात्मक दृश्य हो। यो हामीले पर्खिरहेका थियौं, र यसले पहिलो मुख्य समस्या समाधान गर्दछ। कुडोले होजुकीकी आमालाई भेट्छन् र दुवैले एक-अर्काको प्रशंसाको आदानप्रदान गर्छन्। यो त्यस्तो चीज हो जुन मैले आशा गरिरहेको थिएन र मैले यो KOT पहिलो पटक हेर्दा याद गरेन।
Dōjima र Takinami
हामी मिस डोजिमा र श्री टकिनामामी टोकिसेले प्रदान गरेको प्रदर्शनसँग सन्तुष्ट भएको देख्छौं। यी दुबै प्रकारको क्लब सफलताको पछाडि मुख्य सवारी चालक शक्ति भएका छन्, त्यहाँ उनीहरूको आवश्यक समयमा सबै क्लब सदस्यहरूलाई सहयोग र मार्गदर्शन प्रदान गर्दै। टोकिसको प्रदर्शनसँग ती दुई सन्तुष्ट भएको हेर्न पाउँदा राम्रो लाग्यो।
समस्या समाधान हुने मुख्य समस्या भनेको टोकिसे नागरिकहरुमा जान्छ वा हुँदैन, र हामी सबैलाई थाँहा छ उनीहरूले के गर्छन्। जब उनीहरूले घोषणा गर्छन् कि दृश्य पहिलो स्थानमा छ भने यो पनि गतिशील छ, किनकि यो हामी सम्पूर्ण श्रृंखलाको लागि खोज्दै थियौं। यो धेरै योग्य छ र यसले तपाईलाई राम्रो महसुस गराउँदछ। यो एक महान तरिका एक महाकाव्य कहानी को अन्त छ। कुडो र वास्तवमा अन्य सबै क्लब सदस्यहरू खुशीले कराउन थाल्छन् जब उनीहरूले जितेको बुझेका छन्।
कुराटाको पुरानो मित्र
हामी कुरातको एक पुरानो कोटो क्लब मित्र देख्छौं माशिरो फर्कनुहोस् र उनीहरूको सम्पूर्ण प्रदर्शन हेर्नुहोस्। उनी कुरतालाई धन्यवाद दिन्छिन् र भन्छिन् कि उनले आफ्नो प्रदर्शन कती राम्रो सोचिन्। यो अर्को समस्या हो जुन समाधान गरिएको छ र हामी दुई एक्सचेन्जको पूरकहरू देख्छौं।
मिस Dōjima को स्वीकृति
हामी सबै कोटो क्लब सदस्यहरू पनि देख्छौं मिस डोजिमाले उनीहरूलाई गरेको सहयोगको लागि जब उनी उनीहरूलाई अभ्यास गर्न मद्दत गर्दछन्। मिस डोजिमा मेरो विचारमा एक राम्रो लेखिएको चरित्र हो र उनको चाप एकदम राम्रो गरीएको थियो। हामी उनको भाइलाई उनको प्रदर्शन हेर्न फर्किएको देख्छौं। एक अर्कालाई देख्न छाडे पछि दुई प्रकारका पुनर्मिलन हुन्, तर म उनीहरूको सम्बन्ध के हो भनेर मलाई यकिन छैन। किनकि उनको भाइले कोटो खेल्न छाडे र उनी यससँग धेरै सहमत छैनन्। तर तिनीहरूलाई फेरि एकसाथ हेर्न पाउँदा राम्रो लाग्यो।
एउटा सम्बन्ध जुन मैले वास्तवमै विस्तार भएको देखेको थिएन त्यो होजुकी र कुडो बीचको थियो। मैले पहिले सोचेको थिए कि ती दुई बीच कुनै प्रकारको यौन सम्बन्ध छ। त्यहाँ दुबै बीच धेरै यौन तनाव थियो, तर दुर्भाग्यवस हामी वास्तवमै ती दुबै बीचमा के भयो भनेर कहिले देखेनौं। हुनसक्छ यो म the्गामा विस्तार गरिएको थियो, यद्यपि मैले यसलाई पढिनँ त्यसैले मलाई थाहा छैन।
Tokise कोटो क्लब
अन्तमा हामी देख्छौं कि कोटो क्लब नागरिकहरू जान्छन्, उनीहरूले भर्खरै खेलेका अन्य स्कूलहरूले बधाई दिए। हामी पनि कुडोको साथ अन्तमा यस प्रकारको अनौंठो दृश्य पाउँछौं जुन मैले सोच्न सकिन। यदि कसैलाई थाहा छ कि म के बारेमा कुरा गर्दैछु, वा यो वास्तवमा के प्रतीक मानिन्छ, कृपया तल टिप्पणी गर्नुहोस्।
कोटो क्लबले उनीहरूको नयाँ टुक्राको लागि अभ्यास सुरू गरेको क्रेडिट पछि हामी एउटा अन्तिम दृश्य पनि पाउँछौं। यो एक महान अन्त हो र यसले प्रत्येक विद्यार्थीलाई एक अर्काको लागि रहेको अनुकम्पा देखाउँदछ। यो इमान्दारीसाथ मेरो विचारमा एक महान कथाको लागि एक महान र राम्रा निर्णायक अन्त हो र यो निश्चित रूपमा मेरो सबैभन्दा मनपर्ने एनिमेज मध्ये एक हो।
के एक मौसम P सम्भव छ?
समाप्ति क्रेडिट दृश्य
पहिले हामीले सीजन २ को अन्त्य महसुस गर्नुपर्नेछ, जुन मेरो विचारमा अत्यन्त निर्णायक थियो। यदि तपाईंले यो दृश्य क्रेडिटको पछि हेर्नुभयो भने तपाईंलाई थाहा हुनेछ यो दृश्यले केही गर्न सकेन। उनीहरू गल्ती गर्दै थिए र उनीहरूलाई दिइएको नयाँ टुक्राको समग्र भावना व्यक्त गर्दै थिए। यो एक पुरानो याद आउँछ (यदि तपाईं गर्नुहुनेछ) सीजन १ को शुरुका एपिसोडहरूमा खेल्ने जब उनीहरू क्लबका सदस्यहरू प्रायः गडबड गर्दछन्। यद्यपि त्यस समयमा त्यहाँ लाइनमा धेरै नै थियो, किनकि तिनीहरूले थोरै समयमै धेरै अभ्यास गर्नुपर्थ्यो।
त्यहाँ विस्तार कोठा छ?
धेरै व्यक्तिहरू थट्स भन्दछन् होला जहाँ कथा अन्त हुन्छ, तर के यो हुन्छ? यसको बारेमा सोच्नुहोस्, एपिसोड १ of को अन्त्यमा अन्त्य हुने दृश्य राम्ररी आत्म स्पष्टीकरणात्मक थियो, कोटो क्लब अब नागरिकहरूको लागि आफ्नो यात्रा सुरु गर्न लागिरहेको छ। त्यसैले पक्कै पनि कथा अझै विस्तार गर्न सकिन्छ। हामीले यसलाई बुझ्यौं, मa्गाको मूल लेखक अम्युले KOT का अधिक अध्यायहरू लेखेका छन्। यसैले यो कहानी अझै विस्तार भएको छ किनकि हामी यसलाई बुझ्छौं र तपाईं यसको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ.
सामग्री त्यहाँ छ
KOT का लागि नयाँ मa्गा सामग्री लेखिएको छ र हामी भविष्यका एपिसोडहरूमा यसको विस्तार हुने आशा गर्छौं। हामी यो पनि जोड दिन चाहन्छौं कि दुई सीजनहरू जारी गरिएको समय अत्यन्त छोटो (एक बर्ष भन्दा कम) भयो। नयाँ सीजनका लागि धेरै छोटो र यसले KOT को स्थितिको गवाही दिन्छ।
दुबै सत्रहरूको सफलता
कोनो ओटो तोमरको एनिमेसको २ सत्रहरू एकदम सफल थिए र यसले एकदम राम्रो बिक्री गर्यो, यसलाई फनिमेसनको लागि इजाजतपत्र प्राप्त गरियो र उनीहरूले चाँडै डब सीजन उत्पादन गरे, र पछि डब सीजन २। यसले देखाउँदछ कि दुबै सत्रहरू र KOT समग्र हो। धेरै मूल्यवान जबकि उत्पादन को मामला मा। हामी आशा गर्छौं कि कोनो ओटो तोमारेको उत्पादन कम्पनीका लागि नयाँ सीजन एकदम मूल्यवान हुनेछ।
KOT को अन्त्य
जहाँसम्म KOT को अन्त्य निर्णायक थियो वा थिएन भनेर हेर्ने हो भने हामी निश्चित रूपमा भन्न सक्दैनौं। एक तर्फ हामीले सीजन १ बाट उत्पन्न भएका धेरै जसो समस्याहरू समाधान भएको देख्यौं र हामीले यो पनि देख्यौं कि सत्र १ मा शुरू भएको आर्कहरू सीजन २ को अन्त्यमा समाप्त भएको थियो। अर्कोतर्फ, हामी पछि दृश्यमा पनि देख्यौं क्रेडिट जुन पूरा कोतो क्लबले नागरिकहरूको लागि उनीहरूको अभ्यास सुरू गर्‍यो। यो एकदम राम्रो अग्रणी थियो, र हामी निश्चित रूपमा भन्न सक्छौं कि KOT (अन्नामे अन्त्य) को अन्त्य ज्यादै निर्णायक थिएन।
त्यहाँ धेरै म written्गा सामग्री लेखिएको छ त्यसोभएपछि त्यहाँ सँधै एक तरिका हुन्छ कि कथा जारी हुन सक्दछ र टोकिस हाईस्कूल कोटो क्लबहरू नागरिकहरूलाई यात्रा देखाउँदछ। म वास्तवमै सोच्छु कि कहानी अझ बढी विस्तार हुनेछ र यो आशा तेस्रो एनिम अनुकूलन मार्फत सम्पन्न हुनेछ जुन सीजन 3. हुनेछ। मेरो विचारमा, सीजन entire पूर्ण रूपमा सम्भव छ र धेरै जसो पहिलो र दोस्रोको सफलतालाई दिइन्छ मौसम
कहिले मौसम3एयर?
यो दोस्रो सत्रको लागि लिएको समय
KOT को उत्पादनको मौसम २ ले लिनको लागि दिइएको समयलाई हामी हेर्नेछौं यदि यो उत्पादन भइरहेको छ भने seasonतु मौसम धेरै टाढा छैन। हामी भन्छौ कि त्यहाँ एक मौसम produced अहिले उत्पादन भइरहेको छ। कोनो ओटो तोमरको सीजन २ पहिलो वर्षको रूपमा उसी वर्ष (२०१ () मा प्रसारित भयो। यो हुन सक्छ किनभने उत्पादन कम्पनीले दोस्रो सत्रको उत्पादन शुरू गर्यो, जबकि पहिलो सत्र अझै तयार भइरहेको थियो।
यो एक वर्ष मात्र भएको छ जब हामीले अन्तिम एनिम रूपान्तरण देख्यौं, त्यसैले हामी यो भन्न सक्दैनौं कि कुनै पनि तेस्रो सीजन कुनै पनि समय छिट्टै आउँदैछ (यस वर्ष)। हामी अनुमान लगाउन चाहन्छौं कि कोनो ओटो तोमारेको मौसम3२०२ को आसपास हुनेछ। हामी सुरुमा भन्न चाहन्छौं, तर वसन्त वा २०२१ को समर पनि अधिक सम्भावना छ। यदि दोस्रो सीजन वरिपरि आउँदैन भने हामीले २०२२ भन्नु पर्ने थियो, तर यो असम्भव छ।
आशा छ हामी चाँडै KOT को मौसम3देख्नेछौं तर हामी सबैको आशा यति चाँडै प्राप्त गर्न चाहँदैनौं। हामी हाम्रा कुनै पनि पाठकहरू केवल हाम्रो जानकारीमा भर पर्न चाहँदैनौं। तपाईंले अन्य स्रोतहरू हेर्नु पर्छ र त्यसपछि यस विषयमा एक गणना अनुमान बनाउनु पर्छ।
फेरि हामी आशा गर्दछौं कि यो ब्लग तपाईंलाई यस्तो जानकारी गराउन प्रभावकारी भएको छ जस्तो यो हुनुपर्दछ, हामी आशा गर्दछौं कि तपाईं हाम्रो जानकारीको आधारमा तपाईंको आफ्नै न्यायिक निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ। यस ब्लग पढ्न को लागी धेरै धन्यवाद, हामी तपाईलाई हार्दिक शुभकामना दिन्छौं।
टैग: एनिमे kunoototomare! konoototomare! season3? konoototomareseason3date seasonofsoundsofLive? ध्वनि जीवन ध्वनिफोटोसेसन ध्वनिफाइलसेसन reरेलीजेडेट soundoflifesseason3?
अघिल्लो प्रविष्टि Haganai - एक सीजन3हुनेछ?
अर्को प्रविष्टि Scum's विश सीजन2- प्रिमियर मिति + समाप्ति व्याख्या गरियो